अण्डा मांसहारी की शाकाहारी ? यसो भन्छन् बैज्ञानिक
जेठ १४- अण्डा आफैमा पौष्टिक तत्वले भरिपुर्ण चिज हो । अण्डामा भिटामिन ए, फोलेट, भिटामिन बी टू, भिटामिन बी फाइभ, भिटामिन बी १२, फस्फोरस, सेलेनियम, भिटामिन डी, इ, के तथा जिंक लगायतका तत्व पनि पाइन्छन् । यी तत्वले शरीरलाई दाह्रो राख्ने, दिमाग तेजिलो बनाउने र आँखाको ज्योति बढाउने गर्छन् ।
मानिसहरुले दैनिकरुपमा अण्डा सेवन गर्न पर्नेमा चिकित्सकहरु जोड दिने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार एउटा अण्डामा यतिधेरै पौष्टिक पदार्थ हुन्छ की त्यसले एउटा कोषलाई चल्लामा बदल्न पुग्छ । सायद त्यसैले पनि आजसम्म अण्डालाई मांसहारी बर्गमा राख्ने गरिएको छ ।
विश्वमा आज पनि अण्डा पहिले निस्कियो की कुखुरा ??? अण्डा मांसहारी की शाकाहारी भन्ने प्रश्नको जवाफ आजसम्म कसैले दिन सकेका छैनन् । अण्डा कुखुराबाट निस्कने भएकोले र अण्डाबाट चल्ला निस्कने हुनाले पनि यसलाई मांसहारीमा राखिएको मानिन्छ तर बिज्ञहरु भने दुध पनि त गाई भैसीबाट निस्कन्छ त्यो चाहि कसरी शाकाहारी भयो भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन् । तर हालै बैज्ञानिकहरुले एउटा निचोड निकालेका छन् । बजारमा पाईने अण्डाहरुबाट चल्ला कुनै पनि हालतमा निस्कदैन ।
बैज्ञानिकहरुका अनुसार बजारमा पाईने अण्डाहरुमा फर्टिलाईजर नै हुँदैन । त्यसैले बजारमा पाईने अण्डाहरुलाई मांसहारीमा राख्नु नपर्ने बैज्ञानिकहरुको दाबी रहेको छ । यद्धपी हरकोहीले यसलाई स्वीकार गर्न भने गाह्रो नै पर्नेछ ।
यस्तो पनि परम्पराः जहाँ मान्छेको दाँतले काटेर ६४ ओटा बोका बली दिइन्छ
सेकुवा र सुकुटीका लागि मुसाको सिकार !
साच्चै छिटै मर्छन् त रिसाहा मानिसहरु ?